MR MRT: အရှိန်အဟုန်အလေ့အထုံ
“စိတ်ကို နိုင်အောင်တွန်းချင်တယ်။ စိတ်တွေက မှားမှန်သိရက်နဲ့ မပြင်နိုင်ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။”
ကြုံဖူးတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှုထောင့်ကနေ ဆွေးနွေးပါမယ်။ ပြည့်စုံခန့်ငြားတဲ့အဖြေ မဟုတ်ပါ။ ကြီးကျယ်တဲ့ ဆွေးနွေးချက်လည်း မဟုတ်ပါ။ ထူးထူးထွေထွေ အကျိုးမရှိရင်တောင်မှ အကျိုးမဲ့မှာ မဟုတ်တဲ့ ဆွေးနွေးမှု တစ်ခုတော့ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မှားမှန်းသိလို့ ပြင်ချင်တယ်။ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ချင်တယ်။ စိတ်ကို ပြင်ချင်တယ်။ မထိန်းနိုင်ဘူး။ မပြင်နိုင်ဘူး။ ပြဿနာကို ဒီလို နားလည်ပါတယ်။
မှားယွင်းမှု တစ်ခုခု အကျိုးမဲ့မှု တစ်ခုခုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မိတဲ့နောက်၊ လမ်းမှားပေါ်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက် ကိုယ့်အခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သူတွေ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြဿနာမှာ မှားမှန်းသိတယ်ဆိုတာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အသိဖြစ်ပါတယ်။ မှားမှန်း မသိဘဲနဲ့ အမှန်ဆီ မရောက်နိုင်ပါဘူး။
နောက်ပြီး အမှားကို ပြင်ချင်တယ်ဆိုတာဟာ ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ မှားမှန်းသိလို့ အမှားကို ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် မှန်ဖို့ ကောင်းဖို့ အခြေအနေ တော်တော်ကောင်းနေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ခက်တာက သိသိကြီးနဲ့ မပြင်နိုင်တာပါ။ အမှားကို အမှန်ပြင်ဖို့ ခက်တယ်ဆိုတာ သဘာဝပါ။ ဒီနေရာမှာ ဘုရားရှင် ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ အာသေ၀နပစ္စည်း ဆိုတာကို သတိရမိပါတယ်။ အာသေ၀နဆိုတာ အလေ့အကျင့် အထုံ ဖြစ်ပါတယ်။ အလေ့အကျင့် ဖြစ်နေရင် အထုံပါနေရင် စွဲလမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်နေရင် အရှိန်နဲ့ ဆက်လိမ့်တတ်ပါတယ်။ လုပ်နေကျ တစ်ခုခုကို အရှိန်နဲ့ ဆက်လုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် စလုပ်မိရင် လုပ်လက်စနဲ့ ဆက်လုပ်နေတတ်ပါတယ်။ စလုပ်မိတယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်ဆက်လုပ်နေဖို့ တွန်းအားရသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ အာသေ၀နပစ္စည်းရဲ့ သဘောအဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါတယ်။
"မှားမှန်းသိရက်နဲ့ မပြင်နိုင်ဘူး" ဆိုတာဟာ အရှိန်ကို မထိန်းနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ဘက်မှာ အာသေ၀နပစ္စည်း အရှိန်ရနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ကိစ္စမှာ အရှိန်ရနေရင် ဆက်ပြီးကောင်းနေတတ်ပါတယ်၊ ဆိုးတဲ့ကိစ္စမှာ အရှိန်ရနေရင် ဆက်ပြီး ဆိုးနေတတ်ပါတယ်။ မှားယွင်းမှု မိုက်မဲမှု အရှိန်အဟုန်ကို လျှော့ချနိုင်မှ အမှားကို ပြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အရှိန်ကို လျှော့ဖို့ ဒါမှမဟုတ် လုံးဝ ရပ်စဲလိုက်ဖို့ အရေးမှာ အလွယ်အခက်ဟာ ရနေတဲ့ အရှိန်ရဲ့ ပြင်းအားပေါ်မှာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အရှိန်မပြင်းသေးရင် ပြင်ဖို့လွယ်ပါလိမ့်မယ်။ မိုက်မဲမှု သက်တမ်းရှည်နေပြီ ဆိုရင်တော့ ပြင်ဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
လွယ်သည်ဖြစ်စေ ခက်သည်ဖြစ်စေ မှားမှန်းသိလို့ အမှားကို ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ပြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုးကနေထွက်ပြီး အကောင်းဘက်မှာ အရှိန်ရလာအောင် ဇွတ်ဒရွတ် ပြင်မလား။ နည်းနည်းချင်း ပြင်မလား။ ကာယကံရှင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပြတ်သားမှု နဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား ခိုင်မာမှုတို့ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး သင့်တော်သလို ပြင်ဖို့ပါပဲ။
မန္တလေးက မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ အဆုံးအမဟာ ဒီနေရာမှာ အသုံးဝင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီး မိန့်တော်မူတာက "ကောင်းတာဆိုရင် စိတ်ပါပါ မပါပါ လုပ်လိုက်ပါ။ မကောင်းတာဆိုရင် လုပ်ချင်နေလည်း မလုပ်ဘဲ ပေနေလိုက်ပါ"တဲ့။ ကောင်းတဲ့နေရာမှာ အရှိန်ရလာအောင် ဇွတ်ဒရွတ် ပြင်လိုက်ပါလို့ ဆရာတော်ကြီး ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာ (အာသေ၀နပစ္စည်း) အရှိန်အဟုန် အထုံဝါသနာ ပါအောင် မရမက လုပ်ပါလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကောင်းတဲ့ နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရနေတဲ့ အရှိန်အဟုန် အလေ့အထုံဟာ ဘ၀အဆက်ဆက် သံသရာ အဆက်ဆက် ပါလာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘ၀ဟောင်းက (ကောင်း/မကောင်း) အလေ့အကျင့်တစ်ခုကို လက်ရှိဘ၀မှာ စလိုက်မိရင် လွယ်လွယ်နဲ့ အကျင့်ပါ အရှိန်ရ သွားနိုင်ပါတယ်။ (ကောင်း/မကောင်း) အရှိန်အဟုန် အလေ့အထုံဟာ ဘ၀အဆက်ဆက်က ပါခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ ဒီဘ၀မှာမှ စတင် ထူထောင်မိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အရှိန်အဟုန် အလေ့အထုံဆိုးကို မစမိဖို့ အားမစိုက်မိဖို့ ထပ်ထပ်ပြီး အားမဖြည့်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အပေါင်းအသင်း အသိုက်အ၀န်း ကာလ ဒေသ စတဲ့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကလည်း ကောင်းတဲ့ဘက် ဒါမှမဟုတ် ဆိုးတဲ့ဘက်ရောက်အောင် တွန်းအားပေးတတ်ပါတယ်။ အားကြီးတဲ့ အထောက်အပံ့ ဥပနိဿပစ္စည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုးဆီ တွန်းပို့ပေးတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှောင်ခြင်း၊ အကောင်းဆီ တွန်းပို့ပေးတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှာခြင်းအားဖြင့်လည်း ကောင်းတဲ့ အရှိန်အဟုန် အလေ့အထုံကို ထူထောင်ရမှာ အားဖြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း ဇွတ်ဒရွတ် လုပ်မလား။ နည်းနည်းချင်း လုပ်မလား။ ကာယကံရှင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပြတ်သားမှု နဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား ခိုင်မာမှုတို့ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး သင့်တော်သလို ထူထောင်ဖို့ အားဖြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မှားမှန်းသိလို့ အမှားကို ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကြိုးစားပြီး ပြင်လိုက်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ တစ်ခါ နှစ်ခါ သုံးခါ၊ လေး ငါး ခြောက်ခါ၊ ခုနစ်ခါ . . . အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ကြိုးစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကြိုးစားလိုက်တယ်ဆိုရင် လုံးဝကောင်းမလာအုံးတောင်မှ ဆိုးသွမ်းတဲ့ အရှိန်ကိုတော့ လျှော့ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by Ashin Acara. at 6:27 AM
မှတ်သားနာယူသွားပါတယ် ဘုရား။ တကယ်ကို လိုက်နာပြီး အလေ့အထပြုနိုင်
အောင် သတိပေးတရားစကားတွေမို့ တန်ဘိုး မဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ အရှင်ဘုရား